ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးခင်ညွန့်ကို ဧပြီလ ၁ ရက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးအပြီး တွေ့ရစဉ်။
ဒီပဲယင်း အရေးအခင်း ၁၃ နှစ်ပြည့် ကျင်းပ
ဒီပဲယင်းအရေးအခင်း ၁၂ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ
That means military juntas are world criminals of planning to kill the all opposition people who have no weapons. Very shameful confession by previous Priminister who also involved in killing plot of Depayin massacre.
Apr 09, 2012 02:23 AM
လျှာအရိုးမရှိတိ်ုင်း လိုက်ပြောနေပြန်ပြီး ခင်ညွတ်ကတော့။ မျက်နှာလို မျက်နှာရနိုင်တယ်တာ။ အရှက်ကိုမကိုမရှိဘူး။
Apr 08, 2012 11:44 PM
အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် လုပ်ကြံမှုအကြံစီကိုသိနေပြိးတဲ့အတွက်ဇာတ်လမ်းမှာပါဝင်သူတွေကိုသိရှိပြိးဖြစ်ပါတယ် ဖေါ်ထုတ်ပြိးအရေးယူသင့်ပါသည်။
Apr 08, 2012 09:54 PM
Apr 08, 2012 03:58 PM
Khin Nyunt put ASSK house arrest. Now he claims he saves ASSK live. It is reallyajoke Mr Khin Nyunt. One thing for sure is he killed so many pro democracy activists.